Fanaovan-tsolika fanodinana rivotra mafana
Masinina miondrika CNC
Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny vokatra mamolavola SMC
Ny fiovan'ny mari-pana mandritra ny fizotran'ny famolavolana FRP dia sarotra kokoa. Satria ny plastika dia mpitondra hafanana mahantra, ny fahasamihafana eo amin'ny maripana eo anelanelan'ny afovoany sy ny sisin'ny fitaovana dia lehibe eo am-piandohan'ny famolavolana, izay hiteraka ny fanasitranana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny hazo fijaliana tsy ...
SMC mamolavola tontonana fiara mandeha amin'ny fiara sy tombony
Ny SMC fiara manarona faritra dia manana tombony amin'ny fanoherana ny harafesina, fanoherana fahanterana, fanadiovana mora, lanja maivana, modulus elastika avo, sns., Ary no safidy tsara indrindra ho an'ny faritra manarona fiara. Ireo faritra manarona fiara (etsy aorian'izay dia antsoina hoe faritra manarona) dia manondro ny fiara ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny takelaka fanafanana herinaratra sy ny lasitra fanamainana solika
Famakafakana ny olana lehibe sy ny vahaolana amin'ny takelaka fanafanana herinaratra: 1. Ny hafanan'ny fanafanana ny takelaka fanafanana herinaratra dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana a. Miaraka amin'ny fanatsarana mitohy ny fizotrany ankehitriny, ny fitaovana dia tsy afaka mahafeno ny fepetra famolavolana vokatra; b. Ny fanamiana fanafanana ...
2020 Expo Composites China
ZHENGXI dia handray anjara amin'ny fampirantiana amin'ny 02/09 / 2020-04 / 09/2020, tongasoa anao hitsidika ny trano heva A1327. "Fampirantiana fampiroboroboana fitaovana iraisam-pirenena China" no fampirantiana teknolojia matihanina mitambatra sy lehibe indrindra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika. Hatramin'ny es ...
ZHENGXI SMC Water Production Molling Production Line manomboka ao Yaan
Ny tanky rano SMC dia karazana tanky rano vaovao ampiasaina iraisam-pirenena. Izy io dia tafangona amin'ny alàlan'ny tabilao famatsian-drano SMC avo lenta. Mampiavaka azy ny fampiasana ny resina misy ambaratonga sakafo, noho izany ny kalitaon'ny rano dia tsara, madio ary tsy misy loto; manana ny mampiavaka azy ny tanjaka avo, ny lanja maivana ...
Fampiharana SMC BMC
Ity boky torolalana ity dia mamaritra ny famaritana ny Sheet Molding Compound (SMC) sy ny Bulk Molding Compound (BMC), ny endrik'izy ireo, ny toetrany, ny fanodinana, ny fampiasana farany ary ny fanodinana azy ireo. Omena ny tolo-kevitra momba ny fomba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra sy ny fomba fanamafisana ny tombony azo avy amin'ireo m miavaka ireo ...
Inona avy ireo fiasa miavaka amin'ny fanitsiana ny metaly fitetezana fiara amin'ny indostrian'ny fiara?
Ny ampahany nohitsakitsahana lalina ny metaly dia fomba fanamboarana workpiece (ampahany manindry) endrika sy habe irina amin'ny alàlan'ny fametahana hery ivelany amin'ny lovia, tsipika, fantsona, profil, ary ny toy izany amin'ny alàlan'ny gazety sy maty (bobongolo) hiteraka fahasimbana plastika na fisarahana. Fametahana sy fisandohana dia ...